Ahoana ny fomba hihinanana ny alikanao raha ny hevitro | Tontolo alika
Ny olana mahazatra amin'ny alika dia fandavana sakafo manohana karazan-tsakafo hafa, zavatra izay mametraka ny tompony ho olon-dratsy amin'ny ankapobeny. Ary matetika isika no mameno ny biby fiompintsika amin'ny kapoka kely, manolo ny sakafo amin'ny sakafo an-trano. Na izany aza, na dia mahasoa azy aza ny mihinana sakafo sasany (akoho nahandro, turkey, paoma sns), ny tena marina dia ny sakafon-kalitao no tena ifotony.
Ny olana dia, rehefa ampiasantsika amin'ny sakafo sasany ilay biby, dia mety ho sarotra ny mampianatra azy indray amin'io lafiny io, satria ny mahazatra indrindra dia ny fandavana tsy hihinana sakafo. Amin'ny fotoana hafa dia lavin'ny alika tsotra fotsiny izy io na dia io aza no fototry ny sakafony hatreto; raha izany dia ny zavatra voalohany tokony hatao dia mankanesa any amin'ny veterinera mba hahalalanao raha vokatry ny fahasalamana ity fiovana ity.
Raha vantany vao voarara io dia afaka manao tetika maromaro hamahana ity fifanolanana ity isika.
1. Esory ny zava-mamy avy amin'ny sakafonao. Amin'izany fomba izany dia tsy hahatsiaro ho afa-po ny alika, ary noho izany ny mieritreritra aho hahasarika anao kokoa io.
2. Atsofohy amin'ny rano mafana ny fahana. Manatsara ny fofon'ny sakafo, izay manintona ilay biby.
3. Afangaro amin'ny sakafo malefaka ny fahana. Azontsika atao ny mampiasa paté manokana ho an'ny alika, akoho nandrahoina, vorontsiloza, ary nafafy ny croquette tamin'ny ron-kena akoho namboarina aza. Azo inoana fa ho hitanao io fangaro amin'ny fangaro io. Rehefa mandeha ny fotoana dia hampitomboinay tsikelikely ny habetsahan'ny feed.
4. Aza esorina ilay lovia. Ny alika dia mety mandà ny sakafo vaovao amin'ny voalohany, saingy hiafara amin'ny fihinanana na ho ela na ho haingana. Izany no maha-zava-dehibe ny fanananao sakafo eo am-pelatananao.
5. Tehirizo amin'ny toe-javatra tsara indrindra ny fahana. Raha tsy manana ny toe-piainana ara-tontolo iainana mety ianao, dia tsy hanary fofona sy mahavelombelona fotsiny, fa mety ho ratsy ihany koa. Tsy maintsy ataontsika izay tsy hahatanteraka izany.
6. Manolora sakafo amin'ny tanana. Izany dia mety hampirisika ny biby hanandrana ny kibbles fa tsy handà azy ireo haingana.
Mety ho lava sy sarotra ny fizotrany. Mila miady amin'ny faharetana isika ary mitondra am-pitiavana foana ny alika, manome valisoa azy amin'ny teny mahafinaritra sy teny tsara. Raha hitantsika fa mety dia afaka mitodika any amin'ny mpanabe matihanina isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hihinanana ny alikanao raha ny fahitako azy
Ahoana ny fandroana ny alika tsy misy rano
Ahoana no ahafantarako raha falifaly ny alikako?